Blocker | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Root Call Blocker Pro v2.3.3.9.B36 apk
Root Call Blocker Pro အသုံးပြု ထားတဲ့ ဘော်ဒါ Updated မတင်တာ ကြာသွားပြီဗျာ။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ Updated လေးကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေး ကတော့ ဖုန်း /
Tablet ကိုင်ဆောင် ထားတဲ့ သူများ အတွက် call နဲ့ massages ဘယ်လောက် ပို့ပို့ ဖုန်း/Tablet
ထဲကို ဝင်ခွင့် မပြုတဲ့ Root Call Blocker Proပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် spam call & massages တွေ
ကို လုံးဝ တားဆီးပေးနိုင်ပြီး silent & hidden ပါ လုပ်ထားနိုင်တော့ သုံးရတာ ပိုပြီး အဆင်ပြေ
အောက်မှာ Screen Shot တွေနဲ့လည်း ပြပေးထား ပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်က ဖြစ်ပြီး Android version 2.3 နှင့် အထက် ရှိရမည့် အပြင် ဖုန်းမှာ Root access ပါ
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, February 05, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Blocker, Phone Application
tinyCam Monitor PRO for IP cam v5.7.0 Apk
ဖုန်းနဲ့ cc ကင်မရာ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ tinyCam Monitor PRO လေးပါ အသုံးလိုမဲ့ ဘော်ဒါတွေ
အတွက် ဗားရှင်း အသစ်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ
tinyCam Monitor PRO for IP cam v5.7.0 Apk | 3.2 MB | Resumable Links | Requires Android:1.6 and up |
Material Design for Android 2.2 – 5.0.
PTZ for ONVIF.
Ability to specify HLS/ASF/MMS video sources in vendor (Generic) model Generic URL.
GoPro HERO3 and HERO4 cameras support.
Better support for QHD screens.
Pyae Phyo (MMiTD) by Paye PhyoKyaw
ကဏ္ဍ Android, Blocker, Phone Application, Security
Root Call Blocker Pro v2.3.3.4.B27 apk
Root Call Blocker Pro အသုံးပြု ထားတဲ့ ဘော်ဒါ တွေ အတွက် Updated လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီကောင်လေး က ဖုန်း / Tablet ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ သူများ အတွက် call နဲ့ massages ဘယ်လောက်ပို့
ပို့ ဖုန်း / Tablet ထဲကို ဝင်ခွင့် မပြုတဲ့ Root Call Blocker Proပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် spam call &
massages တွေကို လုံးဝ တားဆီးပေးနိုင်ပြီး silent hidden ပါ လုပ်ထားနိုင်တော့ သုံးရတာပိုပြီးအဆင်
အောက်မှာ Screen Shot တွေနဲ့လည်း ပြပေးထားပါတယ်။
Android version 2.3 နှင့် အထက် ရှိရမည့် အပြင် ဖုန်းမှာ Root access ပါ ရှိရပါမယ်။
ဘလော့ခရီးသည် by Win Hlaing
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, October 16, 2014 No comments:
Root Call Blocker Pro အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ Update လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိတို့ ဖုန်းမှာ
လက် မခံချင်တဲ့ ဖုန်း call နဲ့ massages တွေကို တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ Root Call Blocker Pro လေးပါ။
spam call & massages တွေကို လုံးဝ တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ အပြင် silent & hidden ပါ လုပ်
ထားနိုင်တော့ သုံးရတာ ပိုပြီး အဆင်ပြေ တာပေါ့
Android version 2.3 နှင့် အထက် ရှိရမည့် အပြင် ဖုန်းမှာ Root access ပါရှိရပါမယ်။
play.google ဆိုရင် AU $ 8.53 နှင့် ၀ယ်ရင် ရပါတယ် ဒီဆိုဒ်လေးမှာတော့ free download ရယူနိုင်ပါ
Current Version: 2.2.3.25.B9
Program တွေကို ဖွင့်လို့ မရအောင် Block ပေးမယ့် Program Blocker
Program Blocker ဟာ Windows 7, 8 မှာ အခြားသူတွေ အသုံးမပြု စေချင်တဲ့ App တွေကို ဖွင့်လို့
မရအောင် ပိတ်ထား ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ အပြင် အခြားသူတွေ မိမိ ခွင့်ပြုချက် မရဘဲ Program တွေ
အင်စတော လုပ်ခြင်း ကိုလည်း ပိတ်ထားပေးနိုင်ပါတယ်။
Program Blocker ဟာ The Windows Club ရဲ့ Portable Freeware တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူ
တွေ အသုံး မပြုစေချင်တဲ့ Program တွေကို Password နဲ့ ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Program Blocker
ရဲ့ User Interface ဟာ Microsoft ရဲ့ Metro UI ကို အခြေခံ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ အရောင်နဲ့ ခလုတ်
တွေက Windows 8 App တွေနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။
Program Blocker ကိုယ်တိုင် ကို Password နဲ့ ပိတ်ထား နိုင်တဲ့ အတွက် သင်ကလွဲပြီး အခြားသူများ
က Program Blocker ကို အသုံးပြုနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Master Password တစ်ခု ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး Password မေ့သွားရင် Recover လုပ်နိုင်ဖို့ အီးမေး ပေးထားနိုင်ပါတယ်။
App တွေကို ပိတ်ခြင်းဟာ Program Blocker ရဲ့ အခြေခံ အလုပ် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Windows Apps
အားလုံး နီးပါး ကို ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြု မှုများတဲ့ App ၃၅ ခုကို အလွယ်တကူ ပိတ်နိုင်အောင်
Common Applications မှာ စာရင်းပြုစုပေးထားပါတယ်။
အခြား App တွေကို ပိတ်ဖို့ အတွက် Add New ကို နှိပ်ပြီး exe ဖိုင်ကို ရွေးပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် Blocked
Applications ထဲထည့်ပေးရပါမယ် Program Blocker က Windows Task Manager, Registry Editor
နဲ့ အချို့ System App တွေကို အလို အလျှောက် ပိတ်ထားပေးပါတယ်။ System Apps တွေကို မပိတ်ဖို့
Settings ထဲမှာ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
Program Blocker က Task Manager ကို အလို အလျှောက် ပိတ်ထားတဲ့ အကြောင်းအရင်း က Task
Manager ကနေ Program Blocker ကို မပိတ်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Windows Task Manager အ
စား အသုံးပြုနိုင်ဖို့ Program Blocker မှာ Task Manager ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Task Manager
ကနေ Process တွေကို ပိတ်နိုင်ပါတယ်။ Ctrl+Shift+Esc ကို နှိပ်ပြီး Task Manager ကို အသုံးပြုနိုင်
ပါတယ်။ Windows Task Manager ရဲ့ Shortcut Key ကိုပဲအသုံးပြုထားပါတယ်။
Program Blocker ရဲ့ Pop-Up Messages , Alerts တွေကို မပြပေးစေချင်ရင် Settings ထဲက Hidden
Mode မှာ အမှန်ခြစ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ အခြားသူတွေက သင် Program Blocker ကို အသုံးပြုထား
မှန်း မသိအောင် ဖြစ်ပါတယ်။ Hidden Mode က Program Blocker ကို Taskbar, Notification Tray
စတာတွေမှာ ဖွက်ထားပေးနိုင်ပါတယ်။ Hidden Mode ကို အသုံးပြုပေမယ့်လည်း Apps တွေကို ပိတ်
တဲ့ သူ့အလုပ် ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိတ်ထားတဲ့ App တစ်ခုကို ဖွင့်ရင်လည်း
Message တွေပေါ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Hidden Mode ကို အသုံးပြုထားတဲ့ အခြေအနေမှာ Program
Blocker ကို အသုံးပြုဖို့ တစ်ခုထဲသောနည်းလမ်း က Ctrl+T ကို နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Shortcut Key
ကို Settings ထဲမှာ ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေအပြင် အခြား စွမ်းဆောင်ချက်တွေလည်း ပါရှိ ပါသေးတယ်။
Program Blocker ကို အောက်က လင့် မှာ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။
From: Pyae Phyo (MMiTD) by ThanToeAung
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, April 03, 2014 No comments:
Call & Message blocker update လေးထွက်လာလို့ တင်ပေး လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ ဒီကောင်
လေးကို အားလုံး သုံးဖူးလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။
Play Store မှာ AU$ 2.49 နဲ့ ရောင်းနေပါတယ် ဒီဆိုဒ်လေးမှာတော့ အခမဲ့ ဒေါင်းယူသွား နိုင်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, March 16, 2014 No comments:
Anti-Porn 20.3.1.7 | 5.66 MB
Improved the pornographic image recognision system’s compatibility with Windows XP.
Download Link Anti-Porn 20.3.1.7 ( 5.66 MB )
Download Link Anti-Porn
ကဏ္ဍ Blocker, Security